स’म्बन्ध विच्छेद कस्तो मानिसको सबैभन्दा बढी हुने गर्दछ - dautarimedia.com
स’म्बन्ध विच्छेद कस्तो मानिसको सबैभन्दा बढी हुने गर्दछ
हामी तपाइँहरुलाई सधै प्रेरणादायी कुराहरु दिने गरेका छौ । प्रेरक भनाईहरु, मनछुने लाईनहरु, जीवनशैली, व्यक्तित्व विकास र साथ् साथै सुन्दर जीवनको लागि स्वास्थ्य स’म्बन्धि जानकारीहरु पनि पस्किने गरेका छौ । आशा छ हाम्रो यी जानकारीहरुले तपाइँहरुलाई केहि न केहि सहयोग अवश्य पनि पुर्याइरहेको छ ।
आज पनि हामीले यहाँ तपाइँहरु माझ एउटा जानकारीमुलक कुरा लिएर आइसकेका छौ । श्रीमान श्रीमती वीचको बै’वाहिक नाता स’म्बन्धबाट दा’यित्व रहित तवरले अलग हुने कानुनी आधारलाई स’म्बन्ध विच्छेद भनिन्छ । यसलाई प्राचीन कालमा पारपाचुके, छोडपत्र, भनिन्थ्यो भने परिष्कृत रुपमा सम्बन्ध बिच्छेद भन्ने गरिन्छ ।
यसलाई अंग्रेजिमा Divorce भनिन्छ भने नेपालमा पनि डिभोर्स भन्ने शब्द नै बढी प्र’चलनमा रहेको पाईन्छ भने पारपाचुके पनि भनिन्छ ।
नेपालमा सम्बन्ध बिच्छेदको अभ्यास प्राचीन समयदेखि नै चलन चल्तीमा रहेको पाईन्छ । प्राचीन समयका नेपालीहरुले ध’र्ममा वि’श्वास राख्ने भएपनि बि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा पनि यस स’म्बन्धी ब्यवस्था रहेको र समय सापेक्ष प’रिष्कृत गरिएको नयाँ मुलुकी ऐन २०२० मा पनि स’म्बन्ध बिच्छेद स’म्बन्धी ब्य’वस्था सुधार गरी लागु गरिएको थियो ।
नेपालको कानुनी ब्य’वस्थालाई नियाल्दा महिला र पु’रुषले स्व’तन्त्रताको अधिकारको अभ्यास गर्न पाएको भन्ने तथ्य सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ किनकी सम्बन्ध बिच्छेद गर्नु भनेको आफ्नो स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नु पनि हो । स’म्बन्ध बिच्छेद गर्दा श्रीमान वा श्रीमतीको सामाजिक, मानसिक तथा शा’रीरिक अवस्था माथि आई पर्ने आ’कस्मीक स’मस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
त्यसै गरी श्रीमान श्रीमती बिचको पारिवारिक द्वन्द तथा तनावबाट मुक्ती पाई स्व’तन्त्र जीवन यापन गर्न सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्दछ । मानिसको स’म्बन्ध सधैभर कायम रहन्छ भन्ने हुँदैन किनभने समय अनुसार नै मानिसको सम्बन्ध छुट्ने र मिलन हुने गर्छ । तर स’म्बन्धलाई कस्तो बनाउने र कतिसम्म टिकाउने भन्ने दुवै जनामा नि’र्भर रहन्छ ।
स’म्बन्ध भन्ने प्रेममा रहेका प्रेमी, प्रेमिका वीचको स’म्बन्ध मात्र नभईकन श्रीमान-श्रीमती वीचको स’म्बन्ध पनि हो । पछिल्लो समय श्रीमान श्रीमती वीच पनि स’म्बन्ध वि’च्छेद धेरै मात्रामा हुने गरेको पाइन्छ । यो एक जनाको कारणले मात्र हुँदैन । दुबैजनाले एकअर्कालाई बुझ्न नसकेको कारणले गर्दा पनि यस्तो हुने गर्छ ।
विशेषगरी कस्तो मानिसहरुको सम्बन्ध विच्छेद हुने गर्छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले गर्दा प्राय: मानिसहरुको स’म्बन्ध वि’च्छेद उच्च पदमा रहेको मानिसहरुको हुने गर्छन् । नारी समानतालाई निकै महत्व दिएका देशमा पनि उच्च पदमा पुगेका म’हिलाको जीवनमा पारपाचुके अ’त्यधिक पाइएको छ ।
विशेषगरी महिला सीईओको स’म्बन्ध वि’च्छेद अ’त्यधिक देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । स्टकहोम युनिभ’र्सिटीले बिभिन्न क’म्पनीमा कार्यरत १ सय भन्दा बढी विपरीत लिंगी दम्पतीमा अध्ययन गरेको थियो । त्यसलाई अमेरिकन इकोनोमिक जर्नलमा प्रकाशन गरिएको छ । प्राध्यापक जोन्ना रिक्नेका अनुसार सा’र्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा तीन दशकसम्म भएका घटनालाई यसमा समेटिएको छ ।
मेयर, सांसद, चिकित्सक, प्रहरी अधिकारीमा पनि यो लागू भएको प्र’तिवेदनको दाबी छ । साथै तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ । एजेन्सी
Previous: अरूको सेवा गर्दा गर्दै आफै अस्ताइन् नर्स सावित्री : नि:’धन पश्चात् लेखिएको यो भावुक स्टाटस
Next: म २३ बर्षकी सिगंल हुँ,म एक्लै छु मलाई फोनमा बोल्ने, रमाइलो गर्ने केटा साथी चाहीयो। अहिल्यै पुरा पढ्नुहोस्